Saddex sano iyo sagaal bilood ka dib, Liverpool ayaa lagu garaacay Anfield kulan ka tirsan Premier League guuldarro 1-0 ah oo ka soo gaadhay Burnley, waxaana la jabiyay rekoodhkoodii guuldaro la’aanta ee garoonkeeda.
Benzema iyo Suarez waxay ku jawaabaan waqtiga dhabta ah
Rigooradii soo daahay ee Ashley Barnes ayaa Burnley u suuragelisay inay guul ka gaarto Liverpool kulan ka dhacay Anfield, iyadoo Reds ay dib uga dhacday tartankii horyaalka, iyadoo lix dhibcood ka hooseysa hoggaamiyeyaasha horyaalka ee Manchester United isla kulankaas.
Liverpool ayaa ciyaarta maamulaysay min bilow ilaa dhamaad laakiin waxay wajahday difaac adag kulankii Burnley halka nasiib daro ay sii dheeraatay.
Intii lagu guda jiray qeybtii hore ee ciyaarta, Divock Origi ayaa helay labo fursadood oo goolal ah, mid uu badbaadiyay goolhaye Nick Pope halka kan kalena uu yimid dabayaaqadii ciyaarta markii uu birta garaacay.
Liverpool ayaa sameysay 13 shuut qeybtii hore ee ciyaarta, waana tii ugu badneyd ee ay sameysay koox kasta tan iyo markii barbaro goolal la’aan ah ay la galeen Leicester City sanadkii 2017.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta Liverpool ayaa halkeeda ka sii waday weerarkeeda waxayna ku soo dhawaatay goolka. Goolhaye Nick Pope ayaa la dhacay markii uu Alexander-Arnold u diiday fursad halis ah ka hor inta uuna kubada siinin Mohamed salah.
Daqiiqadii 72-aad Liverpool ayaa fursad kale oo fiican heshay kadib baas uu ka helay Firmino oo loo baahnaa in la sameeyo.
Markii la ciyaaray 82 daqiiqo, kor u qaadayaasha Liverpool ayaa qasaariyay rigoore markii goolhayaha uu sameeyay badbaadin cajiib ah oo quusin ah.
Rigoorada waxaa qabtay Ashley Barnes, kaasoo u gudbiyay Alisson, inkastoo ciyaaryahanka reer Brazil uu raacay kubada.
Goolkii Liverpool ee isku daygii ugu dambeeyay ee ay ku dooneysay inay ku hesho goolka barbaraha laakiin kuma dhamaan karin ciyaarta iyadoo lagu kala nastay 1-0 iyo Burnley oo ku garaacday guul darro la’aan kulankii Anfield ee Liverpool.
axadle 9072 posts